Faritra Androy:FIANAKAVIANA 8 000 NAHAZO VATSIN’ANKOHONANA -
AccueilRaharaham-pirenenaFaritra Androy:FIANAKAVIANA 8 000 NAHAZO VATSIN’ANKOHONANA
Faritra Androy:FIANAKAVIANA 8 000 NAHAZO VATSIN’ANKOHONANA
19/11/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ao anatin’ny fotoan’ny hain-tany tanteraka ny mponina any amin’ny faritra Atsimo amin’izao fotoana izao. Voakasik’izany manokana ny any amin’ny faritra Androy. Tsy mitazam-potsiny izany fahasahiranan’izy ireo izany anefa ny fitondram-panjakana fa nitondra fanampiana tamin’ny alalan’ny minisiteran’ ny Mponina, ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny mponina. Tokantrano miisa telo arivo tao amin’ny kaominina telo ao amin’ny distrikan’Ambovombe no nojerena manokana tamin’izany dia tao amin’ny kaominina Ambanisarike, Ambonaivo sy Ambazoavao. Kaominina telo hafa tao amin’ny distrikan’ny Beloha dia tao amin’ny Beloha, Tranohavo ary Ikopoky ary tsy nohadinoina ny tao Andrefana Atsimo satria dia tokantrano miisa diimy arivo ihany koa no nisitraka ny fanampiana tamin’ny alalan’ny Ramatoa minisitra Onitiana Realy.
Fianakaviana dimanjato hatramin’ny arivo isa isaka ny kaominina no nahazo izany fanampiana izany. Mangahazo milanja dimy kilao isaka ny tonkatrano no natolotra tamin’izany mba tsy hikitihana ny masomboly intsony hiatrehana ny taom-pambolena. Ankoatra ny toetr’andro izay mampijaly ny mponina mantsy dia olana ho azy ireo ihany ny masomboly hambolena. Fanampin’izany dia fikambanan’ny mpanjono miisa folo ihany koa no nahazo harato fanjonona ahafahany manitatra ny asa fihariany. Nandritra ny fidinan’ny delegasionina notarihan’ny ramatoa minisitra dia natao vain-dohan-draharaha ny fandrafetanaa ny fitsinjarana ny Vatsin’ankohonana ho an’ny faritra Androy. Telo alina ariary isam-pianakaviana isam-bolana no hozaraina amin’izany afaka fotoana fohy hanamaivanana ny andavanandron’ny mponina. Raha tsiahivina dia vola mitentina 35 tapitrisa dolara no natolotry ny banky iraisam-pirenena hitondrana fanampiana ho an’ireo olona miisa 320 000 izay tena marefo manerana ny Nosy, 40 tapitrisa ariary kosa hanatanterahana ilay tetik’asa vatsin’ankohonana eo anivon’ny minisiteran’ny Mponina, ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy.
Nisy ny fihaonan’ny Lehiben’ny governemanta, Praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier tamin’ireo mpanao gazety, omaly. Fotoana izay nanaovana ny tomban’ezaka vitan’ny Fitondrana. Nomarihany nandritra izany fa betsaka ny zava-bita ary betsaka ihany koa ny mbola miandry entina ...Tohiny
Hery Rajaonarimampianina : “Mitodika amin’ny vahoaka madinika ny fampandrosoana”